One of My Saturdays
Alarm clock rang when it was time to start my meaningful Saturday. I checked the clock again. It was 5:45AM Saturday early morning. I was lying on the bed forawhile and telling myself so hard to prepare for the activity I signed up for today. I, physically, went to the bathroom to wake me up completely as my mind is still on the bed. My mind started totally wake up after showering for about 15 minutes. When the clock turned to 6:45, my steps were leading to High Point Community Services Association at Lorong 23, Geylang.
Community Services Association is involved in the daily packing of about 1000 food packets for the needy people. This activity starts at 6:30AM whereby the vegetables will be delivered and cooking. We, volunteers, are needed to help packing in order to be ready to deliver at 10AM.
I have been doing those kinds of volunteer activities from October 2010. Of course, I am happy for what I am doing for those people in need. But yet I could not find any activity I am interested in most till this morning. When I got to HCSA, everyone was doing their respective duty. There were also other people from other organizations. Although I wasalittle bit late, my volunteer leader, Shu Yan, told me to join one of the groups who were helping packing. I went down to that group and helped packing.
Our group got Six people including me. One was for putting rice into the packets, two were
for putting curry, one was to cover up the packet, one was to tie those
packets with rubber buns [that was me ;) ], and another one was arranging the packets into one baskets. I did not even notice how many packets we had made until Uncle came and told us that we still needed to
make 50 packs. I thought we just needed 50 more food packets. After making those 50 packets, I pushed that basket to the place where it was supposed to be. Uncle came to us pushing another blank baskets and said we need 50 more packets. Haha..We did that one too and we had to do other ones too.
I gotalot of pressure while I was packing because we had to finish packing at 10AM. Some cars came to the place where we were packing at 10AM and we also had already finished packing. I noticed and told myself that I did something difference today
for needy people as the cars were going from HSCA to those needy people
in order to distribute the food packets we had made.
I am still delightful for what I have done today. Even though I did other activities on other days, this activity is the one I enjoy most. I
was going back home thinking what I did not only for those needy people, also for myself. I feel much more than please than ever. Finally, I found the one I enjoy most. I decided to join that activity for other weeks on my way back to home and gonna start my meaningful Saturday. ;)
I share my love, happiness, and delight-fulness with you guys
လောကဓံလေပြင်း တိုက်ခတ်ဆင်းလို့ပြိုကွဲအိပ်မက် တွေ့ကြုံနေလည်းမုန်တိုင်းများနှင့် ယှဉ်ကာတွဲလျက်ပြန်သန်းခဲ့သည်။ထိုငှက်ငယ်သည်။ငါ၏စိတ်တည်း။ လမ်းတို့ပျောက်ကာ ကြင်သူမရှိအထီးကျန်ဘိလည်းတစ်ကောင်တည်းအားတင်းဒုန်းစိုင်းနင်း၍ပြန်သန်းနေမည် ငါ၏ငှက်သည်။ခရီးဝေးလည်း မမောပန်းညားဘ၀ဆိုသည့် လှိုင်းကြမ်းတံပိုးအား ငါဖောက်ထိုးလို့ပြန်သန်းအုံးမည်။ငါယုံကြည်ရာ ထိုအိပ်မက်များ ရှိရာဆီသို့...ချမ်းချမ်း
Do it anyway :)
People are often unreasonable, illogical, and self centred;Forgive them anywayIf you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives;Be kind anywayIf you are successful, you will win some false friends, and some true enemies;Succeed anywayIf you are honest and frank, people may cheat you;Be honest and frank anywayWhat you spend years building, someone could destroy overnight;Build anywayIf you find serenity and happiness, they may be jealous;Be happy anywayThe good you do today, people will often forget tomorrow;Do good anywayGive the world the best you have, it may never be enough;Give the world the best you've got anywayYou see, in the final analysis, it is between you and your god;It was never between you and them anywayMother Tresa
လောကဓံရယ်ဘယ်သူကများ မာယာတွေဖန်ဆင်းပေးခဲ့ပါရဲ့ဟန်ဆောင်မှုအလျဉ်းမရှိရိုးသားခြင်းအတိဖုန်းနွှမ်းခဲ့တဲ့ငါ့မျက်ဝန်းတွေတောင်မုသားတွေနဲ့ပြည့်နှပ်လို့...တည်မြဲခြင်းမရှိတဲ့လောကနိယာမတွေကြားငါရှင်သန်ပါများတော့လည်းဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးပါစေငါ့နှုတ်ခမ်းတွေ ပြုံးနေတက်ခဲ့ပြီ...ဘ၀နဲ့ချစ်ခြင်းလွန်ဆွဲချိန်တိုင်းကြေမွခဲ့တဲ့ငါ့နှလုံးသားကိုလဲငါကိုယ်တိုင်မြေမြုပ်လို့တစ်ဖန်ပြန်အသက်သွင်းဖို့မကြိုးစားတော့ပါဘူး...စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့ဝေးကွားလွန်းလှတဲ့ ငါ့ကမ္ဘာထဲလောကဓံရယ်...အတိတ်တွေကိုအံတုအနာဂတ်ဆိုတဲ့အရာကိုစိန်ခေါ်ရဲတဲ့လက်ရှိပစ္စုပန်ကိုသာတစ်ခုတည်းသော အဖော်မွန်ကောင်းအဖြစ်ထာဝရနှင်းအပ်ပေးပါ...ချမ်းချမ်း
မြန်မာ့တို့၏ချစ်စရာ့ရိုးရာ (သို့) သင်္ကြန်
နွေဦးချိန်ခါတစ်ကြော့ပြန်ကာရောက်လာလေတော့ရွက်ဟောင်းကြွေလို့ရွက်သစ်ဝေဆာဤတန်ခူးသည်သာမြန်မာတို့၏ချစ်စရာ့အချိန်အခါ...။နှစ်ဟောင်းကုန်လို့နှစ်သစ်ကြိုဆိုဦးဦးကိုကိုဒေါ်ဒေါ်မမကလေးပါမကျန်အကုန်ပျော်ကြဤသင်္ကြန်ကားမြန်မာတို့၏ အနှိုင်းမဲ့အလှ...။ ၀မ်းသာပီတိဂွမ်းဆီထိနှယ်ရဲရဲဝင့်ဝင့်ပွင့်လာကုန်သည့်ရွှေဝါရောင်သန်းဤပိတောက်ပန်းလဲငါတို့နှင့်အတူပါဝင်ဆင်နွှဲဤအတာပွဲ...။ဤတန်ခူးဤပိတောက်ဤအတာရယ်သုံးရောင်စီခြယ်လှနိုင်ပါပေ့လှပါပေ့မြန်မာတို့၏ဓလေ့...။ညစ်ထေးဤစိတ်အတာရေဖြင့်ဆေးကြောစင်ကြယ်သတ္တ၀ါအများကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာစွာဖြင့်မင်္ဂလာအပေါင်းခညောင်းစေသောနှစ်သစ်ကိုသာပိုင်ဆိုင်စေကြောင်းဤနေရာမှဆုမွန်ကောင်းတောင်းဆုခြွေပါ၏...။မှတ်ချက်။ ။ သထုံအရှင်ဆန္ဒာဓိက(ရွှေပါရမီတောရ) ဆရာတော်၏ မြစိမ်းကျောင်းတိုက်၌ သင်္ကြန်တွင်းတရားစခန်းဝင်စဉ် ရေးခဲ့သောကဗျာလေးဖြစ်ပါသည်။
အပေအတေ ကလေကချေနေ့များ မှ ရုန်းထွက်ခြင်း
မိုးလင်းပြီဆို အလုပ်သွားပြီ ဒါကလည်း လူကြားကောင်းရုံပါ။ အလုပ်မှာက အင်တနက်ရတယ်လေ၊ အဲဒီတော့ ချမ်းချမ်းတို့စိတ်ကြိုက်ပေါ့၊ စိတ်ကြိုက်ဆိုလို့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ စာအုပ်တွေ ဖက်၊ လေ့လာစရာရှိတာတွေ ကိုယ်တိုင်လေ့လာ နေတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ GTalk လေးဝင်လိုက်၊ blog လေးလုပ် လိုက်နဲ့လေ။ အဲ အတန်းတက်ချိန်ရောက်ရင် တော့ အပြေးအလွှား အတန်းသွားတက်တာပေါ့၊ ဒါလဲ အထင်ကြီး စရာ မရှိပါဘူး။ ဆရာသင်သမျှ လိုက်မှတ်၊ ဆရာမေးရင် သိသလိုလို မသိသလိုလိုနဲ့ လျှောက်ဖြေလိုက်၊ အတန်း ပြီးရင်ရော အရေးပါတာဘာလုပ်လဲလို့မေးကြည့်၊ ကျွန်မချမ်းချမ်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ပါ တယ်။ အဲဒီလိုပါပဲ ကျွန်မအလေလိုက်ပြီး ကလေကချေ လုပ်နေတာ၊ အရေးမပါတဲ့ဟာတွေကို အရာပေးပါများနေ ပြီ။ စိတ်ရှုပ်တာပါလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး လုပ်ချင်တာတွေကို ဆင်ခြေတရားကင်းမဲ့စွာ လုပ်နေတဲ့ရက်တွေလည်း မနည်းတော့ဘူး။ စိတ်ရှုပ်လို့ လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေတယ်။ လုပ်လိုက်လို့ ပိုစိတ်ရှုပ်ရ တယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ ဒီသံသရာထဲ ကျွန်မလည်နေတယ်။ 70-300 ဖြေရမယ်။ BCIS စာမေးပွဲက ဇွန်၁ရက်နေ့ အဲဒီအတွက်စာတွေလဲမရသေးဘူး၊ ကျွန်မအခုတစ်လော အလေတော်တော်လိုက်နေပါတယ်။ လုပ်လက်စ Project ကလည်း မပြီးဆုံးနိုင်သေးဘူး။ ဒီကြားထဲ ဒီဇင်ဘာမှာ တင်ရမယ့် Project အတွက် Proposal တင်ရတော့မယ်။ ဟင်ကြည့်စမ်း ဒီလောက်များတဲ့ အလုပ်တွေ ရှိနေတာ တောင် အလေလိုက်ဖို့ အချိန်တွေ ကျွန်မမှာတော်တော်ပေါနေတယ်။ သေချာတယ်၊ ဒီအတိုင်းသာဆက်သွားရင် Doggy ဖြစ်တော့မယ်။ ဒါတောင် ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် သုံးသပ် မိတယ် မထင်ပါနဲ့။ BCIS က သူငယ်ချင်းက ဖုန်းလှန်းဆက်ပြီး၊ ချမ်းချမ်းရေ Proposal ကဘယ်လို၊ စာမေးပွဲက ဘယ်တော့ဆိုပြီး ပြောခါမှ ကျွန်မ အပေအတေ ဖြစ်နေမှန်း သုံးသပ်မိတာပါ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မတောင်းပန်ချင်တာ Post အသစ်တွေ ခဏ ခဏ တင်နိုင်တော့မယ် မထင်ပါဘူး။ လာလည် ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဂရုမစိုက်သလို ဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်။ Blog ရိုးကိုးပေါက်လည်း သွားနိုင် တော့မယ် မထင်ပါဘူး။ ဇွန်စာမေးပွဲ ပြီးသွားရင်တော့ ကျွန်မ blog ကိုပြန်ဂရုစိုက်မှာမို့ လစ်ဟင်းသွားခဲ့တာလေး များ ရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ် လို့....chanchan <3
မျက်လုံးတွေဖျက်ခနဲပွင့်လာတယ်။ အိမ်မက်ကြောင့် လန့်နိုးလာတာလားလို့ ကိုယ့်ဘာသာကို ပြန်မေး ကြည့်တယ်။ ဘာတွေမက်လိုက်မှန်းတောင်မသိလိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရင်ခုန်သံ ကိုပြန်ကြားနေရတုန်းပဲ.နာရီ၁ချက်ထိုးသံကြား လိုက်ရတယ်။ ကြားနေကျ ဆိုပေမယ့် ဒီညအတွက်တော့ အရမ်း ခြောက်ခြား နေသလိုပဲ။ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ ရေတွက်ရင်း အိပ်လို့ရအောင် ကြိုးစားလိုက်တယ်။ သွားပြီပြန်အိပ်လို့ မရ တော့ဘူး။ ညနေစာလည်း မစားထားတော့ ဗိုက်ထဲမှာဟာနေသလိုပဲ။ စားချင်စိတ်ကတော့ မရှိဘူး။ ရေတစ်ခွက် ထသောက် လိုက်တယ်။ မျက်လုံးတွေအိမ်အပြင်ဘက် လသာဆောင်ကို ရောက်သွားတယ်။ ကြည့်စမ်းလသာနေ တာပဲ။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက လသာတာကို ကျွန်မအရမ်း နှစ်သက်မိတယ်။ လမင်းကြီးရဲ့အလင်းရောင် ကြောင့် ညဘက်မှာ မြင်နေရတဲ့ အရာတွေကို ကြည့်ရတာ။ ကျွန်မစိတ်ထဲ ဘာကိုကြည်နူးမှန်းမသိ ကြည်နူးမိ တယ်။ လသာရင်ကြည်နူးတက်တဲ့ စိတ်တွေကြောင့် ကျွန်မ ခြေလှမ်းတွေ လသာဆောင်ဘက်ဦးတည်သွားတယ်။ လန့်နိုးလာ ကတည်းက ဘာကိုကြောက်မှန်းမသိကျွန်မကြောက်လန့်နေတာ ခု ချိန်ထိပဲ။ လှန်းထားတဲ့ အ၀တ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့လည်း တစ်စုံတစ်ယောက်က လက်ယက်လှန်းခေါ် နေသ လိုပဲ။ အဆင်မပြေ ခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ကိစ္စပေါင်းများစွာ ကျွန်မအတွေးထဲ ရောက်လာတဲ့အခါ ကျွန်မ ခေါင်းတွေ အရမ်းရှုပ်လာတယ်။ အဲလောက်ထိ စိတ်ရှုပ်မှုကို ကျွန်မခံနိုင်ရေ မရှိတော့ဘူး။ ကျွန်မလုပ်သမျှ အရာ အားလုံးဟာ အလွှဲလွှဲအချော်ချော် ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ရှုပ်နေတဲ့ စိတ်တွေကိုသေချာရှင်းအောင် ပြန်သုံးသပ် ကြည့် လိုက်တော့၊အော်..ငါဟာငါ့အိပ်မက်တွေကို သစ္စာဖောက်မိနေပြီဆိုတဲ့အဖြေ ကိုရခဲ့တဲ့။ ဒီအိပ်မက်တွေကြောင့်ပဲ ကျွန်မရှင်သန်နေပြီးခုလည်းကျွန်မကိုယ်တိုင် ဒီအိပ်မက်တွေကို သတ်မိနေပြီ။ ဟင့်အင်းကျွန်မအတွက် ကျွန်မ အိပ်မက်တွေကသာ အရေးကြီးဆုံးပါ။ ဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့ ဒီနှလုံးသား တစ်စုံကြောင့် ကျွန်မအိပ်မက်တွေကို ကျွန်မသစ္စာ မဖောက်ချင်ဘူး။ ဒါဆို သူ့ကိုရော ကျွန်မဆုံးရှုံးခံနိုင်ရဲ့လား။ ဟင့်အင်း ကျွန်မဆုံးရှုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဟင် ဒါဆိုကျွန်မအိပ်မက်တွေကိုရော။ ဟာဘာတွေလည်းသူနဲ့အိပ်မက် အိပ်မက်နဲ့သူ။ ကျွန်မစိတ်ရှုပ်လာပြီ။ သေချာတာကတော့ ကျွန်မအတ္တတွေကြောင့် သူနဲ့ကျွန်မ ဝေးရတော့မယ်။ ကျွန်မလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်း ကျွန်မဘေးမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လို မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့သူ။ ကျွန်မ အထီးကျန်ချိန်တိုင်း ကျွန်မအတွက်အမြဲတမ်း ရှိနေခဲ့တဲ့သူ။ ကျွန်မ ကသာသူလိုအပ်ချိန်တွေမှာတောင် သူ့အနား ရှိမနေခဲ့တဲ့သူ။ ဂရုစိုက်မှုဆိုတာ သူသာကျွန်မ ကိုပေးခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပြီး။ ကျွန်မဘက်က လုံးဝမပေးနိုင် ခဲ့တဲ့အရာ ပါ။ ခုလည်း ကျွန်မအတ္တတွေကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး သူနဲ့ဝေးရဖို့ကို ကြံစည် နေပြန်ပြီ။ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ၄နာရီ ထိုးခံနီးနေပြီ။ မနက်အလုပ်သွားရဦးမယ်လေ။ နေ့သစ်တစ်ခုကို ဇြတ်သန်းနိုင်ဖို့ ကျွန်မအိပ်စက်အနား ယူရတော့မယ်။ အိပ်ရေးပျက်တာ၊ စိတ်တွေရှုပ်တာတာပဲ အဖတ်တင်သွားတယ်။ တိကျတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုမချမှတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ခုလည်းမနက်အလုပ်ရှိလို့အိပ်ရတော့မယ်။ သူ့အကြောင်း စဉ်းစားရင် တောင် အချိန်တွေကန့်သတ်ထားသလို ကြာကြာတောင် စဉ်းစားပိုင်ခွင့် မရှိတဲ့ ကျွန်မ။ မျက်စိတွေမှိတ်လိုက် တော့တယ်။ အိပ်လို့မရလည်းအိပ်ရတော့မှာပဲ။ သူ့မျက်လုံးတွေကို မြင်လာတယ်။ ကျွန်မအတ္တတွေကြောင့် ကျွန်မဆုံးဖြတ် ချက်ချမိရင် သူနဲ့ကျွန်မဝေးရတော့မယ်။ သူနဲ့မဝေးနိုင်ရင်လည်း ကျွန်မအိပ်မက်တွေကို ကျွန်မ သတ်မိသလို ဖြစ်တော့မယ်။ တိကျတဲ့ အဖြေတစ်ခုရမှာလည်း မဟုတ်တော့ အိပ်လိုက်ပါတော့မယ်။ မနက်ဖြန် ထုံးစံအတိုင်း ချစ်လားလို့သူမေးလာရင်လည်း မချစ်ဘူးလို့လည်း မငြင်းရက် ချစ်တယ်လို့လည်း ၀င်မခံ ရဲတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်မဘက်ကလည်း ပြန်ဖြေရတော့မယ် ‘‘လဲသေလိုက်’’ လို့......ချမ်းချမ်း Read More...
I am justanormal girl who enjoy every moment along this journey of life. I believe every each of us is given at leastagift once we stepped into this world. Some says it is talent, some says it is expertise. Whatever it is called, we all are born with suchaunique gift, and it is just only matter of time to find out what our talent is. So I am one of those who is trying to dig out that gift I was given.
Jane ta lane tane Jane
ကျွန်မ အိပ်မက်များ၏လက်တွဲဖော် CSI
Best Free Hit CountersHelp Desk Software အိမ်....
home - Design by: FinalSense